1xBet And The Dragon Boat - Myanmar Sports
🎁 1XBET AND THE DRAGON BOAT 🎁
💰 € 15,000 ( ယူရို ၁၅,၀၀၀ ) အထိ ရရှိနိုင်မယ့် 1xBet And The Dragon Boat ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ် 💰
1xBet And The Dragon Boat ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး € 15,000 ( ယူရို ၁၅,၀၀၀ ) ဆုကြေးကြီးထဲက တစ်ခုကို အခုချက်ချင်းပဲ ကံစမ်းရယူလိုက်ပါ။
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 03. 06. 2022 – 09. 06. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၃၁ မိနစ် (3June 2022 00:01 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၂၉ မိနစ် (9June 2022 23:59 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဆုကြေးများ ( 1xBet And The Dragon Boat ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဒုတိယဆု – € 3,000 ( ယူရို ၃,၀၀၀ )
တတိယဆု – € 2,000 ( ယူရို ၂,၀၀၀ )
စတုတ္ထဆု – € 1,000 ( ယူရို ၁,၀၀၀ )
ပဥ္စမဆု – € 700 ( ယူရို ၇၀၀ )
ဆဌမဆု – € 500 ( ယူရို ၅၀၀ )
သတ္တမဆု – € 400 ( ယူရို ၄၀၀ )
၈ ကနေ ၁၃ နေရာ – € 200 ( ယူရို ၂၀၀ )
၁၄ ကနေ ၂၅ နေရာ – € 100 ( ယူရို ၁၀၀ )
Qualifying 1xBet “ Dragon Boat ” games: အကျုံးဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ –
Golden Dragon – အစရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၃။ ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီး ရလဒ်တွေ ထွက်ပြီးချိန်မှ နောက်ထပ် ၇၂ နာရီ ( ရုံးဆင်းချိန် ၃ ရက် ) နောက်ပိုင်း ဆုကြေးများကို အနိုင်ရ ကစားသမားများ၏ မိန်းအကောင့်ထဲကို ထည့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေသားဆုများသည် နောက်ထပ် လောင်းကြေးလိုအပ်ချက်များ ( 1xbet bonus wagering requirements ) မရှိပါ။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( 1xBet Dragon Boat ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet Dragon Boat ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( Dragon Boat Offer 1xbet ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၀။ 1xBet သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မဆို ကတ်စတန်မာများ၏ ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းများနှင့် (Log in) လော့ဂ်အင် မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် ကတ်စတန်မာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ကတ်စတန်မာများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကစားသည့် နည်းလမ်း မမှန်မကန်လုပ်သည်ဟု 1xBet မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိပါက 1xBet သည် ထိုကဲ့သို့သော ကတ်စတန်မာများ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet June 2022 promotion ) အတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဘောနပ်စ် ( bonus casino 1xbet ) များကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( KA Gaming Tournament 1xBet ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။